Shenzhen MINGXUE Optoelectronics Co., Ltd (anonziwo MINGXUE, hunde code: 838130) yakavambwa muna 2005, MINGXUE ari mugadziri aidaro tsvakurudzo, kukura, kugadzirwa uye rokutengesa ose chakaita ichikura chiedza, akatungamirira zviuno, akatungamirira mazariro uye akatungamirira kuratidza module vanopfuura 13.000 mativi mamita kugadzirwa miti.
Mingxue ane ruzivo kwemakore anopfuura 13 mune akatungamirira, vashandi vane unyanzvi, yepamusoro equipments uye strick kuzvidzora uye unobereka mugadziriro kutiita imwe aitungamirira boka iri akatungamirira basa.
MINGXUE ave successively akawana ehurumende-pamwero yepamusorosoro emakambani, pamusoro 100 makambani akatungamirira, uye dzimwe honorary mazita, uye vanopupurirwa ne SGS / ISO9001: 2000 / TS16949 CE RoHS, FCC, ERP, Ul LM-80 uyewo Ul 8800 kuti akatungamirira kura mwenje.
MINGXUE kwakaita kukura zviedza vari zvinowanzoshandiswa chirimwa mufekitari, girinihausi, kukura matende nezvimwewo, uye MINGXUE kwakaita rinoparadza vari zvinowanzoshandiswa Supermarket namaketani, hotera zvirongwa, pasherefu matumba, akangwara dzimba uye nezvimwewo; MINGXUE kuti kuratidza module zvinowanzodavirwa kushandiswa zvikuru nhau, panze indoor okushambadza zvikumbiro nezvimwe minda.
Kuti zvinoshingaira kupindura guru National nzira yokuita yepamusorosoro emakambani, uye kuti vawanze pakutsvakurudza mari. Saka tinogona kuva rikurumidze akatungamirira zvigadzirwa, kuti zvinhu zvedu zvakawanda yemakwikwi kumba uye kunze, The kambani yakanga vakabudirira dziri Beijing neeq muna 2015.
MINGXUE tariro akamisa refu tikabatana nemi kuburikidza edu yepamusoro zvinhu zvedu nomwoyo wose Service!